China sy ny orinasa Christmas Tree and Wellheads | Cepai
Ny Tree Christmas Wells sy ny Wellheads dia mifanaraka amin'ny API 6A fanontana farany faha-21, ary ampiasao ny fitaovana mety amin'ny toe-javatra iasana arakaraka ny fenitra NACE MR0175.
Ny Wellhead sy ny hazo krismasy nataon'i CEPAI dia ampiasaina amin'ny fandavahana tsara sy famokarana solika na gazy, fampidirana rano ary fihenan'ny lavaka. wellhead sy hazo krismasy dia napetraka eo an-tampon'ny fantsakana hamehezana ny habaka anular eo anelanelan'ny casing sy ny tubing, afaka mifehy ny tsindry wellhead ary manitsy ny tahan'ny mikoriana tsara ary mitondra menaka avy amin'ny fantsakana mankany amin'ny fantsom-pantsakana.
Izahay dia manamboatra ny lohany sy ny hazo krismasy mifanaraka amin'ny fenitra API 6A tanteraka, azo omena ihany koa mba hihaona amin'ny kilasy fitaovana feno, ny maripana ary ny fari-pahaizana PSL & PR. Manana karazan-doka tsara ho an'ny safidin'ny OEM isika, toy ny lohan-tsofina mahazatra, rafitra lava lohataona, lohataona mafana, lohataona fampidiran-drano, loharano mitsitsy fotoana, loharano roa fantsona, fantsakana lehibe.
Anarana Christmas Tree & Wellheads
Model Hazo Noely mahazatra / Loharanon-tany mafana / Loharano marobe sns
Pressure 2000PSI ~ 20000PSI
Ny famolavolana, ny famokarana, ny fitsapana ary ny fitaovana dia arahin'ny fenitra API 6A tanteraka
indrindra tafiditra lohany fantsona, vavahady vavahady, kitron-tsofina, flange ambony, lakroa sns
Rafitra lehibe an'ny karazana fisarahana, karazana tafiditra ary karazana fantsona roa
Azo fehezina lavitra amin'ny valizy fiarovana sy rafitra fanaraha-maso maromaro
Misy fiarovana azo antoka amin'ny afo sy porofo-mipoaka
Azo antoka sy azo antoka ny hazo krismasy. Fandidiana sy fikojakojana mora sy mety
FAHATONANA BETSAKA IRAY
Namboarina ho an'ny fampiharana izay ny toe-karena no tena mpamily. Vita izany raha tsy manimba ny kalitao na ny fiarovana.
◆ Misy lavadrano hatramin'ny 5.000 psi sy haben'ny famenoana hatramin'ny 3 1/8 ".
◆ Mety amin'ny tontolo somary marikivy sy manimba.
□ Ampiasao ny tombo-kase elastomerin'ny fidirana an-tserasera an'ny angovo Energy ary ny fitambaran'ny tombo-kase elastomer.
FIHAMONJANA IRAY MIORA
Namboarina ho an'ny rindranasa izay fantatra na azo vinavina ny fivoaran'ny famokarana. Ity foto-kevitra ity dia misy ny volavolan-tombo-kase an'ny elastomer an'ny Energy Systems ary ny valizy "state of the art" maodely 120/130 vavahady.
◆ Misy lavadrano hatramin'ny 15000 psi sy habeny famenoana hatramin'ny 4 1/16 ".
□ Mety amin'ny tontolo marikivy sy manimba ary rehefa mamokatra amin'ny faritra marefo ny tontolo iainana na manakaiky ireo faritra be mponina (AA ka FF).
◆ Ny tontolon'ny famokarana dia misy ny solika, gazy, fiakarana entona ary ny hetsika tondra-drano sy tsindrona rehetra rehefa misy olana ny mety hitrandrahana.
◆ Azo alaina miaraka na tsy misy seranan-tsambo fanaraha-maso. Misy seranana maromaro raha ilaina.
◆ Voamarina amin'ny API 6A, Appendix F, PR-2 miampy fanandramana tsingerina fanampiny araky ny takian'ny CEPAI.
FAHAMARINANA IRAY NY serivisy CRITIKA
Namboarina ho an'ny fepetra famokarana henjana indrindra. Ahitana ny teknolojia famehezana metaly-ho-vy an'ny paty Energy Energy ary ny valizy vavahady modely 120/130 tsy misy elastomerika.
◆ Misy fantsakana hatramin'ny 20 000 psi sy habe amin'ny famenoana hatramin'ny 7 1/16 ".
□ Mety amin'ny tontolo marikivy sy mahasosotra ary rehefa mamokatra amin'ny faritra saro-kenatra ny tontolo iainana na manakaiky ireo faritra be mponina (AA ka HH).
◆ Ny tontolon'ny famokarana dia misy famokarana entona avo lenta sy hafanana avo lenta.
◆ Arakaraka ny singa, ny mari-pahaizana momba ny mari-pana ambonin'ny tany dia mety hahatratra 450 ° F.
◆ Azo alaina miaraka na tsy misy seranan-tsambo fanaraha-maso mitohy. Misy seranana maromaro raha ilaina.
◆ Ampiasaina ny teknolojia famehezana metaly-ho-vy an'ny pataloha angovo.
◆ Voamarina amin'ny API 6A, Appendix F, PR-2 miampy tsingerina fanampiny 300 araka ny takian'ny CEPAI.
Namboarina ho an'ny famenoana kofehy maromaro. Ny boka mitambatra dia azo alamina amin'ny toerana mety indrindra amin'ny tranokalan'ny Operator. Ny valva dia mety manatrika ny voalohany na mifandimby izay ahatrehin'ny tady lava ny lalana iray ary ny string fohy 180 ° offset.
◆ Misy fantsakana hatramin'ny 10,000 psi sy habeny famenoana hatramin'ny 4 1/16 ".
◆ Mety amin'ny tontolo mamy na marikivy.
◆ Ny tontolon'ny famokarana dia misy ny solika, gazy, fiakarana entona ary ny hetsika tondra-drano sy tsindrona rehetra.
◆ Volavola angovo momba ny angovo ho an'ny haavony farany ambany sy fidirana faran'izay betsaka. Izany dia midika hoe mitahiry vola sy fepetra miasa azo antoka kokoa ho an'ireo mpandraharaha mpamokatra.
◆ Ampiasao ny fanelingelenana ara-dalàna an'ny angovo Energy sy ny tombo-kasen'ilay elastomer ary ny tombo-kase elastomer azo alaina amin'ny famehezana vy amin'ny vy raha ilaina izany.
FAMONOANA FAMPIANARANA elektrika
Namboarina ho an'ny fampiharana ESP na ESPCP. Ny Energy Systems dia nanara-penitra ny safidin'ny penetrator hamenoana ny fepetra takian'ny Operator nefa tsy hadinony ny filàna fitazonana rafitra mahomby.
◆ Misy lavadrano hatramin'ny 5.000 psi sy haben'ny famitana hatramin'ny 4 1/16 ".
◆ Natao ho an'ny sokajy 1 fizarana 1, fizarana 1 tsy 1, 1 na safidy penetrator packoff tariby tsotra.
◆ Ny safidy penetrator dia nohamarinina hanomezana fahafaha-manao sy mora ny fametrahana azy.
◆ Mety amin'ny tontolo mamy na marikivy ary manimba.
◆ Ny tontolon'ny famokarana dia misy solika ary mifanaraka amin'ny fiasan'ny tsindrona raha toa ka olana ny fanenjehana.
◆ Ampiasaina ny fanelingelenana ataon'ny Energy Energy sy ny tombokase misy elastomer ary ny fitambaran'ny tombo-kase elastomer.
FIVORIANA TSY MISY FANAVOTANA / SISA AN'NY FRAC FLOW
Namboarina ho an'ny fangatahana fisondrotana artifisialy ho an'ny Rod Pumps and Progressing Cavity Pumps (PCP). Mba hanompoana tsara kokoa ny tsena fananganana artifisialy, ny Energy Systems dia nanampy ny Integral Production BOP (IPBOP) ho an'ny portfolio-n'ny vokatra. Ny IPBOP dia mamela ny Operator hiditra soa aman-tsara ao anaty lavadrano amin'ny alàlan'ny famehezana ny tsorakazo na, raha misaraka ireo tsorakazo ireo dia mamela ny iray hanajamba ilay lavadrano.
◆ Misy fantsakana hatramin'ny 2.000 psi ary habe famenoana ary anisany 4 1/16 ".
◆ Ny tontolon'ny famokarana dia menaka saingy azo ovaina mba hifanaraka raha toa ka mamorona tontolo iainana mahasosotra kokoa ny asa fanindromana mifanila aminy.
◆ Na dia azo omena aza ireo singa mahaleo tena, ny Integral Production BOP (IPBOP) dia afaka mampiditra ny bonnet head tubing, ny famokarana BOP ary ny flow flow, na izay mitambatra amin'ireo, ao anaty singa iray.
◆ Ny Integrated BOP dia manolotra fitehirizana vola raha ampitahaina amin'ny fividianana ny entana tsirairay. Ankoatr'izay, mihena be ny lalana mitete, ary ny haavony ankapobeny, izay mety ho 50% ambany, dia azo antoka kokoa ho an'ireo Operatera mpamokatra.
◆ Ny ondrilahy BOP dia manana ny fahaizany mikatona amin'ny tehina 0 hatramin'ny 11/2 ".
FAMONOANA FANAVOTANA NY COILED
Namboarina hamela ny mpandraharaha hanohy ny famokarana avy amin'ny fantsakana solika sy gazy manainga voajanahary nefa tsy misy mpiasa lehibe. Ny Energy Systems dia niaina fampiharana isan-karazany tamin'ny fantsom-bozaka mihombo, anisan'izany ny fampiasana toy ny fantsom-pamokarana voalohany hanoloana ny fantsom-pifandraisana, ary hampiasaina toy ny tady haingam-pandeha amin'ny famenoana efa misy, izay ampidirina anaty fantsakana efa misy, fisondrotana artifisialy, fiakarana entona, famaranana ESP ary concentric roa. tady.
◆ Mampitombo ny tahiry amin'ny fampihenana ny fotoana hijanonan'ny rig fandavahana amin'ny toerana misy azy.
◆ Mampihena ny vidin'ny tubular amin'ny alàlan'ny fampihenana ny lavaka sy ny haben'ny casing.
◆ Vita haingana kokoa noho ny rig mahazatra sy ny fantsom-pifandraisana.
◆ Fisorohana ny fahasimban'ny famoronana mifandraika amin'ny tsiranoka mamono.
◆ Azo alaina ao anaty kofehy API malaza rehetra sy fifandraisana misy flange na fitambaran'izy roa.
◆ Ny isa fanerena dia azo ampitahaina amin'ny tsindry voan'ny fantsona mihorongorona.
BOP famokarana an-tsokosoko ho an'ny PUMPS CAVITY & PROGRESSING CAVITY
Namboarina mba hanohanana ireo fiasa tapaka tsara amin'ny fizotran'ny entona voajanahary ankehitriny. Ho fanampin'izany, ny rafitra dia miasa tsara ho an'ny rindranasa izay ny tahan'ny famokarana avo lenta haingana ary ny tadiny siphon dia tokony ampiana amin'ny daty manaraka mba hanatsara ny famokarana. Ny flange head tubing kely kokoa dia mamela ny famitana tubing tsy maharitra ara-toekarena sy ny famenoana fantsom-pako nentim-paharazana. Ity karazana fahavitana ity dia manafoana ny filàna fitaovana mitokana lohataona sy mpanangona hazo mandritra ny asa fanapahana fantsakana, mitsitsy fotoana sy vola. Ny rafitra dia manohana fantsona fantsona mahazatra mifangaro na fantsona mifangaro.
◆ Misy lavadrano hatramin'ny 15000 psi.
□ Mety amin'ny tontolo marikivy sy mahasosotra ary rehefa mamokatra amin'ny faritra saro-kenatra ny tontolo iainana na manakaiky ireo be mponina (AA ka HH).
◆ Manafoana ny filàna fitaovana Wellhead Isolation sy Tree Savers mampihena ny vidin'ny fitaovana fanofana.
◆ Mampihena ny vidin'ny fanofana stacking noho ny habeny kely kokoa.
◆ Mamela tadidy siphon hihazakazaka mamaky ny XT, miantsona ary voafono. Ny XT lehibe kokoa dia azo esorina ary soloina hazo ara-toekarena kokoa mifanaraka amin'ny haben'ny fantsona sy ny tsindry famokarana ny fantsakana mikoriana.
◆ Azo ampiasaina ihany koa amin'ny DTO Wellhead System manome fotoana fandavahana fanampiny sy tahiry famitana.
Namboarina mba hamelana ny fidirana an-tsehatra tsara nefa tsy manala ny XT sy ny fantsom-pifamoivoizana. Io dia ahafahan'ny Operator mitazona ny fifandraisana amin'ny fantsom-pifamoivoizana, noho izany, mampihena ny vidim-piainana mifandraika amin'ny fampifandraisana indray ny fantsakana ary mamela ny fantsakana haverina haingana kokoa.
◆ Misy fantsakana hatramin'ny 10,000 psi sy habeny famenoana hatramin'ny 9 ".
◆ Ny tontolon'ny famokarana dia misy fiakarana solika, entona ary gazy.
◆ Manamora ny fahazoana miditra amin'ny tadin'ny fantsona ho an'ny mpiasa.
◆ Manome fidirana mora kokoa ho an'ny Operator Production amin'ny valves vavahady.
◆ Amin'ny famitana feno-lehibe kokoa, afaka mampihena be ny haavon'ny takelaka fantsakana.
□ Ampiasao ny tombam-bidin'ny elastomerista fanelingelenana ananan'ny rafitra angovo sy ny fitambaran-tombo-kase elastomer ary ny teknolojia tombokase vy-amin'ny-vy misy patanty.
LEHIBE - FIHAONANA BORE
Namboarina ho an'ny tahan'ny fivezivezena avo lenta sy ny fampiharana izay mety ho olana ny fikaohon-tany noho ireo taham-pivoarana ireo. Io fotokevitra io dia mampiasa ny haitao farany an'ny Energy Systems amin'ny metaly vy sy elastomer ary ny valizy vavahady Model 120/130.
□ Misy fantsakana hatramin'ny 15000 psi sy habeny famenoana ary ao anatin'izany ny 7 1/16 ".
◆ Arakaraka ny singa, ny mari-pahaizana momba ny mari-pana ambonin'ny tany dia mety hahatratra 450oF.
◆ Ampiasaina ny teknolojia fanamafisam-peo vita amin'ny vy mifamatotra amin'ny angovo misy ny angovo.
◆ Voamarina amin'ny API 6A, Appendix F, PR-2 miampy tsingerina fanampiny 300 araka ny takian'ny CEPAI
Namboarina mba hahafahana misintona ny paompy ao anaty rano miaraka amina fidirana amin'ny fantsakana fantsakana kely. Ny lavadrano dia novokarina avy tao amin'ny fanafoanana; noho izany, mijanona ho simba hatrany ny fantsona mandritra ny fidirana an-tsehatra tsara. Ny fatiantoka eken'ny ESP dia fikojakojana voajanahary izay takiana amin'ny paompy midina. Ity firafitry ny famolavolana ity dia mamela ny fikojakojana hitranga amin'ny ampahany amin'ny fotoana miaraka amin'ny fomba fanatanterahana ny mahazatra.
◆ Fahafahana mamerina mamerina fantsakana efa misy sy fandavahana fantsakana vaovao.
◆ Fifandraisan-dàlana mitohy miaraka amin'ny fidiran'ny BOP.
□ Fenoy tanteraka ny serivisy amin'ny alàlan'ny fepetra "miaina tsara".
◆ Manokana ny tariby elektrika sy ny fifangaroan'ny tariby.
◆ Fifandraisana haingana momba ny asa sy ny famitana.
Namboarina mba hanomezana fidirana amin'ny hazo maina mankany amin'ny fantsakana any ambanin'ny tany avy amin'ny sehatra tongotra misy fihenjanana (TLP) sy SPAR.
◆ fenitra famolavolana casing riser tokana sy roa ho an'ny fampiharana riser ambony rehetra.
◆ Azo alaina hatramin'ny 15000 psi lohataona ary habe hatramin'ny 7 1/16 ".
◆ Hangeritra fanitsiana ny halavirana maharitra sy matevina mba hahantona haingana sy haingana.
◆ Fepetra fandrefesana enta-mavesatra izay mamela ny fametrahana sy fikojakojana tsotra.
◆ Volavolan-dalina mifehy izay mampihena ny lanjany sy ny hahavony ho an'ny fameperana fatratra sy ny fetran'ny lanja fisondrotana ho an'ny vatan'ny rano lalina.
◆ Fampiasana valves afovoany (6.650 psi) eo anelanelan'ny tsindry raha tehirizina.
◆ Seranan-tsambo marobe sy tsipika fanaraha-maso mitohy.
◆ Ampiasaina ny teknolojia metaly mifatotra amin'ny metaly mifatotra amin'ny angovo.
◆ Ny famolavolana tontolon'ny fidirana fidirana dia mamela ny fidiran'ny mpiasa azo antoka amin'ny toe-javatra tery tery.
Previous: LOHATENY FANASITRANA
Manaraka: Valve-by mitsingevana vy roa
Hazo Noely Sy Wellhead
Wellhead Sy Christmas Tree
Wellhead Ary Fitaovana Hazo Noely
Wellhead sy ny fikolokoloana hazo krismasy